KACAANKA SERIE A: Horyaalka Talyaaniga oo fasalka soo aaddan ee 2017-18 la ciyaari doono 4 maalmood – Gool FM
Horudhac: West Bromwich Albion vs Chelsea… (The Blues oo baadi-goobaysa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Liverpool ee Premier League)
(Roma) 25 Abriil 2017 – Wixii ka bilaabma fasal-ciyaareedka soo aaddan ee 2017-18, Serie A waxaa la ciyaari doonaa min Jimce ilaa Isniin, iyadoo kulankii duhurka xilliga qadada loosoo wareejin doono Sabtiga. Waxaa sidoo kale laga wada xaajoon doonaa xuquuqaha TV-yada fasalka 2018-2021.
Markii hore waxaa laga dooday in la qaato moodalka Spanish-ka balse markii dambe waa la xooray, iyadoo lasoo werinayo in ciyaaraha lakala ciyaari doono 4 maalmood iyadoo saacaduhuna ay aad u kala duwanaan doonaan.
Galabta Axadda waxaa jiri doono ugu yaraan 3 kulan oo la dheeli doono waqtigii hore ee 15:00 xilliga maxalliga ah, balse ciyaartii dhici jirtey Axadda 12:30 ayaa loo wareejin doonaa Sabtiga kaddib guushii laga sameeyay kulankii Milano Derby – si ciyaarta looga daawado China iyo suuqyada Aasiya.
Waxaa sidoo kale jiri doona kulamo joogto ah oo dhici doona fiidka Axadda iyo habeenka Isniinta, si kooxaha dheelaya Champions League iyo Europa League loo siiyo waqti ku filan oo ay ku nastaan jir ahaanna kusoo kabtaan. Kulanka haatan dhaca 18:00 Sabtiga sidiisa ayuu sii ahaan doonaa, balse waxaa lagu soo kordhin doonaa mid kale oo dhici doona Axadda isla waqtigaas.
Waxaa horay loo xaqiijiyay in horyaalka Talyaaniga ee Serie A uu fasalka soo aaddan adeegsan doono hannaanka cusub ee VAR (Video Assistant Referee), kaasoo meesha ka saari doona garsoorayaasha taagan goolka agtiisa.
XOG: Xiddigo matalayay qaranka Soomaaliya oo dib loo soo cellin doono